Date My Pet » Hawaii – Visting wako dzinovaraidza
kubudikidza Pet Travel
Hawaii – Visting wako dzinovaraidza
Last updated: Jan. 17 2021 | 3 Maminitsi verenga
Hawaii ari chimbwamupengo akasununguka State ukuwo Continental United States havasi, Saka mhuka dzinovaraidza vasina kubvumirwa kupinda Hawaii kutoti vakapinda munhu airwara kwake oga.
The Hawaii Paramende kuziva kukosha kufamba mhuka dzinovaraidza vakachinja mitemo kuitira kuti vanoshanya Islands kwaigona dzinovaraidza yavo pamwe. Pari mitemo chete anoshandawo Dogs & Cats.
Kunyange vaifunga havana akariita nyore uye zvinodhura, kana zvakanaka ukagadzirira ivo achasunungura dzinovaraidza wenyu pakarepo pamusoro pakusvika panguva Honolulu yendege.
Step One – murapi wemhuka Certificate – Anofanira kuva yepakutanga – hapana photocopies. chitupa Izvi zvinofanira wakabudiswa murapi wemhuka wako kwete kupfuura 14 mazuva asati asvika yako Hawaii.
Vaccinate: The dzinovaraidza anofanira kunge nhomba kanenge kaviri yaro mupenyu nokuda chimbwamupengo uye majekiseni iwayo anofanira kuva kupfuura 90 nemazuva. Kana mushonga yaiva-gore rimwe rezinesi ipapo ichangoburwa kubaya kunge chakaitwa kwete kupfuura 12 Mwedzi risati mhuka vasvika Hawaii. Kana mushonga wakange ari wemakore 3 rezinesi ipapo ichangoburwa kubaya kunge chakaitwa kwete kupfuura 18 mwedzi asati asvika muna Hawaii. Muzviitiko ichangobva kubaya kunge chakaitwa hapana kupfuura 90 mazuva asati asvika muna Hawaii.
The rugwaro kubva murapi wemhuka wako unofanira kutaura kupfuura ichangopfuura kubaya musi, uye yapfuura kubaya musi. The chitupa anofanira kuratidza mushonga zita, Mugove kana Serial nhamba, booster penguva, kubaya dating, ichiri kushanda uye kana ari gore rimwe kana vatatu rezinesi mhando.
Hutano hwakanaka: The chitupa anofanira kutaura kuti mhuka iri utano hwakanaka uye kuti rave kurapwa nokuti Zvikwekwe kwete kupfuura 14 mazuva asati asvika muHawaii pamwe chigadzirwa Fibronil kana ane zvechigarire chigadzirwa noenderana. Dzinoratidza pamusoro gwaro musi mishonga uye chigadzirwa anoshandiswa.
Step Two – Microchip The rugwaro kubva murapi wemhuka wako unofanira kutaura nhamba microchip uye zvinofanira ane chokwadi chokuti murapi wemhuka akakwanisa atarise Chip zvinobudirira.
The Chip anofanira kuva vomureza US nyaya (farira) kana (Home Zvakare) mhando. The microchip inofanira kanhu asati ropa mhuka kuti bvunzo.
Step Three – OIE-FAVN chimbwamupengo Ropa Test Unofanira kuva rugwaro kubva anotenderwa rabhoritari achiratidza kuti mugumisiro Muedzo kupfuura kana kuenzana 0.5IU / Rine mamiririta. The chitupa anofanira kuratidza dzinovaraidza microchip nhamba. The bvunzo ropa rinofanira kuitwa asina kupfuura 18 mwedzi uye kwete isingasviki 120 mazuva asati asvika muna Hawaii.
murapi wemhuka Your anofanira kutora ropa yokuenzanisira chako dzinovaraidza uye muchikepe kuti:
Step Four – Application Tumirai epakutanga magwaro aya – hapana photocopies kuti:
Animal kupatsanura varwere Branch
Komberedza munhu cashiers cheki kana mari hurongwa uwandu $165.00 por dzinovaraidza.
Zvinyorwa cheki anofanira svika 10 mazuva asati mhuka pakasvika. Sezvo magwaro hazvigoni vakazvigadzirirwa murapi wemhuka wako kupfuura 14 mazuva asati asvika munofanira kuvabudisa pedyo Federal Express kuti akodzere yendege kusunungurwa hwechipfuwo.
Step Five – kusvika Unogona chete kupinda Hawaii kuburikidza Honolulu International Airport uye chete pakati maawa 8 ndiri uye 9 pm. dzinovaraidza Your achatorerwa yendege kuti kupatsanura varwere centre riri pana 99-951 Halawa Valley Road, Aiea, Hawaii 96701 – runhare 808 483-7151.
Muchazvinhonga kumusoro dzinovaraidza vako nzvimbo kuti
Kudanana Tips For The Shy, netsa Person
Tips Kuva Chick Magnet